MarketingPilot: Microsoft Dynamics CRM Yakabatanidzwa Kushambadzira Management | Martech Zone
MarketingPilot: Microsoft Dynamics CRM Yakabatanidzwa Kushambadzira Management
Chipiri, Gunyana 15, 2013 Muvhuro, October 14, 2013 Douglas Karr
Microsoft Dynamics CRM uye KushambadziraPilot kukupa iyo nzwisiso iwe yaunoda kuti unzwisise zvirinani vatengi vako. Nemaitiro ane simba uye kushambadzira analytics, iwe unogona kunongedza zviri nyore uye kupatsanura vatengi vako, unzwisise zvavanofarira, uye wozozvibata panguva yakakodzera neshoko rakakodzera. Microsoft Dynamics CRM uye KushambadziraPilot inounza bhizinesi kushambadzira otomatiki uye multichannel mushandirapamwe manejimendi.
Yakabatanidzwa kushambadzira manejimendi - Gadzirisa uye gadzirisa yako ekushambadzira mashandiro ane simba, magumo-kumagumo manejimendi maturusi akagadzirirwa kubatsira mabhizinesi nemasangano kuronga, kuitisa, uye kuteedzera kushambadzira kwavo zvakanyanya.
Kushambadzira zviwanikwa manejimendi - Chengetedza zvikwata zvako zvichishandira pamwe uye uve nechokwadi chekuti zviwanikwa zviri pamapurojekiti akakodzera.
Budgeting - Tora chaiyo-nguva nzwisiso mumushandirapamwe shandisa uye kushambadzira bhajeti, uye fungidzira zvakanyatsonaka.
Campaign manejimendi - Wirirana zvirinani nekutengesa uye nekuvandudza kushanda pamwe kwechokwadi yakawanda-chiteshi otomatiki.
Kutenga midhiya & kuronga - Ronga, enzanisa, uye simbisa rako bhizinesi midhiya kutenga zviri nyore kupfuura nakare kose.
Sarudzo mhinduro - Yakagadzirirwa kuzara-sevhisi, kutenga nhepfenyuro, kugadzira, kushambadza, chiitiko, ruzivo, PR uye akananga mhinduro mamiririri, KushambadziraPilot mhinduro inogadzirisa mashandiro uye kugadzirisa kugadzirwa uye purofiti kure kupfuura echinyakare manejimendi manejimendi masisitimu.
DemoChimp: Shandura Madhimoni Ako